The Ab Presents Nepal » एमसीसीको खुलेर बिरोध गर्ने भिम रावल अहिले बोल्न मिल्दैन् किन भन्दै छन पुरा पद्नुहोस !
एमसीसीको खुलेर बिरोध गर्ने भिम रावल अहिले बोल्न मिल्दैन् किन भन्दै छन पुरा पद्नुहोस !
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा एमसीसीबारे पार्टीले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य भीम बहादुर रावलले अहिले एमसीसीबारे सार्वजनिक रुपमा आफूहरुले टिकाटिप्पणी गर्न नमिल्ने आचारसंहिता बनाएको सुनाए । आफूहरु अहिले अध्ययनको चरणमा रहेकोले छिट्टै यसबारेमा प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने र आफ्ना कुरा राख्ने सुनाएका छन् ।
अमेरिकाले प्रष्ट रुपमा एमसीसीमा संशोधन अमान्य भनेर बोलिसक्यो नि ? अब के गर्नुहुन्छ ?हामी त कार्यदलमा छलफल गर्दैछौं । अब कसले के भन्यो ? त्यतातर्फ जाँदैनौं । तर, यसबारेमा पनि हामी कार्यदलमा छलफल गर्छौं ।
कार्यदलमा तपाईहरुले के छलफल गरिरहनुभएको छ ?अहिले हामीले तथ्यहरु संकलन गरिरहेका छौं । हामी छिट्टै प्रतिवेदन तयार पार्छौं । कार्यदलको समय सकिएको छ । यसबारेमा पनि कुरा हुन्छ ।
अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्टमा भएको कुनैपनि प्रावधान परिवर्तन गर्न नहुने अडान राखेको छ ? तपाईहरु के भन्नुहुन्छ ?यस सम्बन्धमा हामीले व्यक्तिगत रुपमा टिकाटिप्पणी नगर्ने आचारसंहिता र विधि बनाएका छौं । यी सबै विषयबारे कार्यदलमा छलफल हुन्छ । हामी एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै विषयमा कार्यदलमा छलफल गर्छौं । तथ्यमा आधारित विषयमा छलफल गर्छौं ।
अमेरिकाले दिएको अनुदान नेपालले लिने कि नलिने ? यो कुरा आज नेपाली जनतालाई बताईदिनुहोस ।त्यो विषयमा अहिले हामीले कार्यदलमा दस्तावेजहरुको अध्ययन गर्ने, तथ्यहरु केलाउने लगायतका सबै कामहरु गरिरहेका छौं । हाम्रो राष्टिय हित सर्वोपरि हुन्छ ।तदअनुरुप अघि बढ्छौं ।
कार्यदलको सदस्य बन्दैमा तपाईको मुखमा बुझो लागेको हो ?अहिले हामी अध्ययनमा छौं । कार्यदलमा काम गरिरहेको बेलामा अहिले के के विषयमा छलफल गरिरहेका छौं भन्नेबारे भन्न चाहन्छन् । सबै विषय परीणामको रुपमा आउँछन् । कार्यदलमा कसले के भनेको छ ? भन्ने कुरा बाहिर ल्याउन मिल्दैन् ।